upload error ဖြစ်နေလို့ပါ။ - MYSTERY ZILLION
upload error ဖြစ်နေလို့ပါ။
ဒီနေ့ aroZif ရဲ့ Office က webpages တွေကို upload တင်တာ
File .................... is too big. This files will not be uploaded.
အဲတာနဲ့aroZif လည်း File size ကြီးလို့ဖြစ်တယ်ထင်ပြီး 5.26 KB ရှိတဲ့ .jpg ကို တော့လည်း အဲဒီ error ထပ်ပေါ်လာတယ်။
File ytour5.jpg is too big. This file will not be uploaded.
ကျွန်တော် ထင်တာကတော့ ဆာဗာ အဲရာလားမသိဘူး သိတာကိုပြောတာနော်